Imbali yeChanel logo | Abadali be-Intanethi
Kule post, siza kukwazi Imbali yelogo yeChanel, siya kuhlalutya imbali emva kophawu.
Ukuba sithetha ngobunewunewu kunye neempawu ezintle, iChanel iza ngokukhawuleza engqondweni. Ngenkulungwane ye-XNUMX, ukunyuka kukaCoco Chanel kwihlabathi lefashoni kwakumangalisa kakhulu. Intshatsheli yefashoni yakudala, kunye nokushiya ecaleni iindlela ezilandelwa ngamanye amabhrendi kwiingqokelela zazo.
Enye yezona logo zifanelekileyo kwihlabathi namhlanje, nokuba ingaphezulu kweminyaka eyi-100 ubudala. Umfanekiso nge ezimbini eziphotheneyo C, ihlala inkcazo yobunewunewu ngokugqibeleleyo kubasebenzisi bayo.
1 Imbali yelogo yeChanel
2 uphawu lwe-chanel
3 Ukuchwetheza kweChanel
4 I-Chanel Color Palette
5 Kutheni iChanel logo isebenza kakuhle?
Eyona ndlu idumileyo yefashoni emhlabeni, yazalwa ngo-1910 kwikomkhulu laseFransi, eParis, nguGabrielle Chanel owaziwayo okanye njengoko eyaziwa ngokuqhelekileyo, uCoco Chanel. Wavula ivenkile yomnqwazi ebizwa ngokuba yiChanel Modes, apho abona badlali badumileyo baseFransi belo xesha bathenga iminqwazi kwaye oko kwamkhokelela ekubeni aqatshelwe kwaye azuze nodumo.
Chanel ngokuhamba kwexesha, ikwazile ukuvela kwaye ayihlali ibambelele kwihlabathi lelaphu, kodwa sinokuyifumana kwizinto zokuthambisa, kwihlabathi lezemidlalo, izixhobo zobuchwepheshe, phakathi kwamanye amacandelo, ngaphezu kweziqholo zayo ezidumileyo, ezaziwa emhlabeni jikelele.
I-logo yeChanel inebali elijikelezileyo, Ngolunye lweempawu eziye zagcina umfanekiso wayo ngendlela engapheliyo ixesha elidlulele. Ngokungafaniyo nezinye ii-brand, azikho ii-logo ezininzi, kodwa enye eneenguqu, ehlala iqhelana notshintsho lwamaxesha.
Kwi-1915, ngokuvulwa kwe-Chanel yokuqala ye-Maison De Couture, sinokubona ukuba yayisele isebenzisa i-logo ye-Chanel esaziyo namhlanje.
Ngokumalunga nomfanekiso wenkampani yeChanel, siya kuthi yi indibaniselwano yomfanekiso kunye nokubhaliweyo, apho zombini zinokusebenza ngokwahlukeneyo. Ngamanye amaxesha sibona umfanekiso kwicala elinye, njengoko kunokubakho kwiingubo zabo kunye nesicatshulwa kwelinye, umzekelo kwiingxowa zabo.
I-brand emblem yadalwa ngokuqala kwendlu yefashini, ibonakala ilula, malunga nayo ezimbini eziphotheneyo C ezimele igama kunye nefani yomyili uCoco Chanel. Izinto ezihambelanayo zikhokelela ekudaleni uvakalelo lwemvisiswano kunye nokugqibelela.
ibonakala enyakeni Ngowe-1925, kwiibhotile zokuqala zeziqholo yophawu kwaye kamva iqala ukubonakala kuzo zonke izinto zendlu; iibhegi, ubucwebe, izixhobo, njl.
Emva koyilo lwesimboli kukho imfihlelo, ekubeni kukho iingcali ezininzi abathi ubuntu budala kunokuba kukholelwa. Kukho neethiyori ezahlukeneyo malunga nentsingiselo yesimboli sayo, enye yezo thiyori kukuba inxulumene noKumkanikazi weNyoka, kodwa oku akuzange kuqinisekiswe nabani na.
I-Chanel logo, njengoko sitshilo, inokufumaneka ngeendlela ezahlukeneyo, isimboli kunye nesicatshulwa kunye, isimboli nje okanye isicatshulwa.
Owona mbuzo uphindaphindiweyo xa ufunda olu phawu, yeyiphi ifonti yeChanel logo. Kulungile apha sikunika impendulo. Olu luhlobo lohlobo lochwethezo, olwathi kamva lwaba luhlobo olulodwa olubizwa ngokuba yi "Chanel" ekhuselwe yi-copyright.
Abaqulunqi abaninzi bathelekisa i-typography yenkampani kunye neefonti zasimahla ezifana Ifonti ye-ITC Blair's Pro Bold, ifana kakhulu neye-brand's.
I-Chanel Color Palette
Uphawu lwefashoni luye lwaba ungqongqo kakhulu malunga nokusetyenziswa kwemibala emfanekisweni wakhe xa uphinda uzivelise kumajelo eendaba, ekubeni imibala esetyenziswa ikakhulu imnyama namhlophe. Nangona ngesinye isihlandlo esikhethekileyo uye wasebenzisa imibala eyahlukileyo emfanekisweni wakhe.
Ukuba sithetha ngemibala ayisebenzisileyo kwiziqwenga zakhe zokuyila, sinokubona kwigolide, isilivere, ebomvu, njl. Ukwahluka ngokwengqokelela yefashoni ukwenza impembelelo.
Kutheni iChanel logo isebenza kakuhle?
Njengoko besesitshilo ngaphambili, uphawu lweChanel yefashoni ayitshintshanga ngokuhamba kwexesha. Zimbalwa iimpawu ezifikelele kweli nqanaba lokungatshintshi umfanekiso wabo, okwenza iChanel ihambelane uphawu olunophawu olusebenzayo noluzingisayo ekuhambeni kwexesha.
umfanekiso webrand, ayizange iphambuke kwimigaqo eyilandelayo nefuna ukuyidlulisela kubaphulaphuli bayo, nangona isiqwenga esiphambili sophawu, njengeCoco Chanel, siyanyamalala kwaye kukho utshintsho lwabanikazi.
I-logo elula, ezimbini ezidibeneyo ze-C, kodwa emva kwazo iye yaba lolunye lweempawu zehlabathi zehaute couture. Kuyinto engenakugwemeka ukuhlangabezana nale logo kwaye wazi ngokukhawuleza ukuba isambatho esivela kule ndlu yefashoni, akukho nto kwiiqoqo zayo ezingenalo uphawu oluprintiweyo kuyo. I-Chanel ibe uphawu oluye lwakhupha ubuhlanya bokubeka uphawu kuzo zonke iingubo zayo kwaye oku kubangele oko kwaziwa ngokuba yi-logomania.
Kubonakala ngathi yonke into eyenziwa ziimpawu ezinkulu, kule meko iChanel, ibangela a inguqu kwihlabathi lefashoni.
Ilogo yebhrendi ingaphezulu koyilo, Luphawu lotyikityo oludibanisa imbali, ixabiso kunye nondoqo walo., Kungenxa yoko le nto uChanel eqhubeka nokwenza isigqibo esilumkileyo sokuyitshintsha kancinane kangangoko. Nangona iziqwenga zayo ziguquka ngokuhamba kwexesha, ilogo yayo enoyilo lwakudala yenye yezona zaziwayo.
Iimpawu ezininzi zodidi olunje ngeChanel kunye neGucci zikhetha ukusebenzisa ii-initials kwilogo yazo, xa kuthelekiswa nezinye ezifana neHermes okanye iArmani, ezisebenzisa izilwanyana ukufuzisela amaxabiso azo.
Kodwa ngaphandle kwamathandabuzo, ukhetho lukaChanel loyilo lwelogo apho lunokudlala khona ngesimboli kunye nokuchwetheza, ukuzisebenzisa ngokwahlukileyo okanye kunye, kunye nobuhle obulula, obubonwa ngokulula kwaye buveliswe kwakhona, bunika umphumo ongcono njengoko sibonile kweli nqaku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Imbali yelogo yeChanel